/blog/gallery/Raw Isotretinoin (Accutane) maka ihe otutu: Na-emeso ihe otutu na Isotretinoin
Ihe na 02 / 01 / 2019 by Dr. Patrick Young dere na gallery.
Isotretinoin bụ ọgwụgwọ acne dị irè. N'ebe a, ị ga-ahụ nyocha reviews nke isotretinoin, njirimara isotretinoin, mmetụta mmetụta nke etiti na ihe ọmụma ndị ọzọ gbasara ọgwụ ahụ, gụnyere usoro ọgwụgwọ na usoro nchebe.
Kedu ihe bụ Isotretinoin (Accutane)?
Ị na-achọ raw isotretinoin (Isotretinoin 4759-48-2)? Ọfọn, ọ bụrụ na ị maghị ya, Isotretinoin bụ ọgwụ na-edozi ọgwụ ọnụ. N'ihe gbasara njirimara isotretinoin, a na-eji ọgwụ ahụ eme ihe maka ọgwụgwọ na igbochi nke siri ike, na-agbanwe nne na nodular ma ọ bụ acne cystic.
N'ihe banyere chemical chemicals Isotretioin, raw isotretinoin bụ 13-cis-retinoic acid. Ọ na-abịa dị ka odo odo ma na-egbuke egbuke ma nwee ihe dị arọ nke 300.44. A na - ejikọta ya na retinoic acid yana retinol (vitamin A).
Wokpu bụ cystic ihe otutu?
Ikekwe ị na-eche ihe bụ ihe na-akpata ọrịa cystic. A cystic ihe otutu bụ ụdị akpụkpọ ụkwụ siri ike nke na-esi na egbochi akpụkpọ anụ, na-akpata ọrịa na mbufụt. Ọtụtụ mmadụ, ihe dịka 80 percent nke ndị agadi n'etiti 11 na 30 afọ na-arịa ọrịa otutu, ma ọ bụ nanị obere akụkụ nke ha nwere ọnyá cystic, bụ nke dị njọ karịa ụbụrụ oge ochie.
Oria bu otutu na-ebuwanye ibu karia ihe na-adighi nma ma o nweghi ike igapu obuna mgbe i weghaara ogwu. Aṅomi nke na-ekpo ọkụ nwere ike ịbụ ihe na-egbu mgbu na ọtụtụ akwụkwọ n'azụ ụcha miri emi.
Eleghi anya ihe otutu gi na-aga n'ihu na-eto eto n'agbanyegh i otutu mgbalị gi iji kpochapu ya. Okwesighi ka icho anya maka mmeko okwu. Okwu ahụ pụtara ịbawanye ngwa ngwa n'ọtụtụ ihe, n'ọnọdụ a, ihe otutu. Ya mere, mmeghari okwu dika mmeghari, gbasaa, ma obu nmalite.
Ugbu a, nke ahụ.
Ọ bụrụ na ị nwara usoro ọgwụgwọ ndị ọzọ dịka ọgwụ nje ogwu na ọgwụ dị iche iche iji agwọ ọrịa cystic pimple ma ọ bụ acne, ma ọ bụ n'efu, Isotretinoin ga-abụ ihe ngwọta kasịnụ. E wezụga nke ahụ, a pụkwara iji ọgwụ ahụ mee ihe maka ọgwụgwọ maka ọnọdụ anụ ahụ ndị ọzọ, dabere na ndụmọdụ dọkịta.
Aha aha aha Isotretinoin
Isotretinoin bụ ọgwụ na-ere azụ, ngwaahịa nke vitamin A. nke a na - akpọkwa aha ya:
Ọzọkwa, ọgwụ ahụ dị na nsụgharị dị iche iche.
Kedu ka Isotretinoin Work?
E wezụga nke ahụ, Isotretinoin na-eji ya, ikekwe ị na-eche, sị, "olee otú Accutane si arụ ọrụ?" Gịnị mere o ji dị ike nke na ọ nwere ike ime ihe ụfọdụ ọgwụ nje na ọgwụ ndị na-enweghị ike?
Ọfọn, nke a bụ nkọwa nke azịza nye ajụjụ 'olee otú arụ ọrụ na-arụ?'
N'ụzọ yiri nke ahụ na ọgwụ ndị ọzọ, Ọrụ Isotretinoin site n'ịgbanwe nsụgharị DNA gị. Mmetụta nke ngbanwe bụ Mbelata nke nha yana mmepụta nke glands.
Mgbe ị na-ewe Isotretinoin, ọ na-ewepụsị ihe ndị na-egbuke egbuke nke akpụkpọ ahụ gị bụ ndị na-ahụ maka mmepụta sebum. Sebum bu mmanu mmanu na oke mmeputa nwere ike ibute nsogbu di iche iche dika ihe otutu.
Sebum dị ukwuu na-egbochi oghere ndị ahụ dị iche iche, na-egbochi mmanụ anụ ahụ ka ọ na-asọpụta. Nke a na - eme ka mmanụ dị n'okpuru akpụkpọ ahụ. Ihe nje bacteria nke na-eme ka acne vulgaris (acne vulgaris) na-eme ka o nwekwuo ike n'ile ihe dika sebum bu nri ha.
Mgbe Acne vulgaris na-eri na sebum n'ime akpụkpọ gị, ha na-emepụta ihe ndị na-emepụta ihe nakwa dịka abụba bara uru. Ihe ndị na-emepụta ahụ na mmiri ọgwụ ahụ na-eme ka mmiri ahụ dị njọ ma mee ka ha na-afụ ụfụ. Akara akpụkpọ anụ na-esite na ya pụta.
Ya mere, mgbe Isotretinoin na-ekpuchi mmiri ndị ahụ dị iche iche, ọnụ ọgụgụ ha na-emepụta sebum na-ebelata. N'ihi ya, a na-ebelata nkwụchi cores site na sebum. N'iburu n'uche na akpụkpọ ụkwụ ahụ, ma ọ bụ ihe otutu, na-emekarị na-akpata ọrịa akpụkpọ anụ site na sebum, mmetụta nke ọgwụ ahụ na-ejikwa ha.
Ọ na-egbochi nchịkọta nke ọdọ mmiri dị iche iche, ya mere, ọ dị ntakịrị ka nje bacteria na-eme nke ọma na akpụkpọ ahụ. Ọgwụ ahụ na-ebelata akpụkpọ ahụ. E wezụga nke ahụ, ọgwụ ahụ na-ebelata mkpụmkpụ nke mkpụrụ ndụ ndị a wụfuru n'olulu mmiri ahụ. Nke a na-ebelata ike ha iji mepụta blackheads na whiteheads.
Raw Isotretinoin for Acne Treatment
Isotretinoin 4759-48-2 obi abụọ adịghị ya na ọgwụgwọ kachasị mma, karịsịa maka ikpe dị njọ ebe e ji ọgwụ nje mee ihe na ọgwụ ndị bu pụta ụwa abaghị uru. Otu ihe dị egwu banyere Isotretinoin dị ka ọgwụgwọ maka otutu bụ na ị nwere ike iji ya maka oge dị mkpirikpi, ma eleghị anya, 16 gaa na 20 n'izu iji kwuo na ị na-enwe obi ụtọ na mkpịsị gị, n'agbanyeghị otú ha si dị njọ.
Ka o sina dị, onye na-ahụ maka ọgwụ nje gị nwere ike ịkwado usoro nke abụọ nke ọgwụgwọ nke oge yiri nke ahụ maka njedebe zuru oke gị. Nke a adịghị ka ọtụtụ ọgwụ ndị ọzọ nwere ike ịchọrọ iji ya mee ogologo oge maọbụ ọbụna ruo mgbe ebighi ebi ka ị nọgide na-adị na mmiri.
Ọ bụ ezie na ọ naghị esiri gị ike inweta pimples ọzọ mgbe ị na-eme ọgwụgwọ Isotretinoin, ọkachamara nlekọta ahụike gị nwere ike inye gị ndụmọdụ ka ị na-agafe ọgwụ ọgwụ mgbochi maka nlekọta nke akpụkpọ ụkwụ ọhụrụ gị.
Ogologo oge ole ka mmadụ ga-amalite ịhụ nsonazụ Accutane?
Nke a nwere ike ijide gị na mberede ma ọ bụrụ na ị nụtụbeghị banyere ya n'ihi na ọ bụ ihe na-abụghị nke ị tụrụ anya ya; akpiri gi nwere ike idiwanye njọ karia ịmalite iwere Isotretinoin. Hey! Akwụsịla ma ọlị!
Otú ọ dị, ị ga-amalite ịhụ Ihe na-esi na ya apụta n'ime 7 ruo ụbọchị 10 nke usoro ọgwụgwọ gị. Ụdị njirimara gị ga-amalite nwayọọ nwayọọ nwayọọ nwayọọ n'ime oge ahụ.
Otutu, oke ma ọ bụ nso-kpamkpam nchacha mmeghari na-eme n'ime 16 ruo 24 izu nke usoro ọgwụgwọ. Ozugbo ị na-agafe na usoro ahụ, ị ​​ga-enwe ike ịbụ nke na-enweghị ihe ọ bụla ruo ogologo oge.
A na-atụgharị usoro a na-emegharị na-atụ aro na ihe ndị na-eme ka a chọpụtaghachi nlọghachite mgbe usoro ọgwụgwọ gasịrị. Ka o sina dị, a ghaghị ịmalite imegharị ihe ọzọ ma ọ dịkarịa ala izu 8 mgbe ụbọchị ikpeazụ nke mbụ (mbụ) N'ezie. Nke a bụ n'ihi na enwere ike imezi ihe otutu n'ime oge ahụ mgbe ọ gasịrị.
Otu esi eji Isotretinoin
A na-ahụkarị (Isotretinoin) n'ime okwu 10-mg, 20-mg yana 40-mg dị arọ gelatin. Ihe ndị dị na mkpụrụ ndụ ọ bụla nke ọgwụ a gụnyere beeswax, hydroxyanisole butylated, mmanụ soybe, disodium edetate, mmanụ na-esi nri hydrogenated na flakes mmanụ mmanụ hydrogenated.
Onye ọ bụla nke isotretinoin 10mg, isotretinoin 20mg na isotretinoin 40mg capsule nwere usoro dị iche iche na-egbuke egbuke. Njirimara 10mg bụ iron oxide (red) na titanium dioxide, 20mg nwere FD & C Red Nr. 3, FD na C Blue No. 1, na titanium dioxide mgbe 40mg nwere FD & C Yellow No. 6, D & C Yellow No. 10, na titanium dioxide usoro.
Na asụsụ layman isotretinoin 10mg na-abịa na agba aja aja, 20 mg na maroon, mgbe 40 mg bụ odo.
Isotretinoin onunu ogwu
Isotretinoin onunu ogwu dị iche maka ndị ọrịa dị iche iche. Ya mere, ọ dị mkpa na ị na-agbaso ndenye ọgwụ dọkịta gị nke ntụziaka eji eji aha ya.
Nchịkọta mkpịsị aka bụ na ụbụrụ isotretinoin mbụ gị dabeere na arọ ahụ gị, okwu ahụike nke ị na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe yana ike nke ọgwụ ahụ.
Maka ndị okenye na ụmụaka ndị dịkarịa ala 12 afọ, nkezi ọgwụ kwa ụbọchị bụ 0.5 ka 1 milligram (mg) kwa kilogram (kg) nke ibu ahụ. Kedu ụdị ọgwụ dọkịta gị na-atụ aro, a ga-ewere ya na nri mgbe ọ bụla.
A na-ewere dose ọgwụ nke Isotretinoin dị ka ụzọ abụọ kewara abụọ na onye nwere ndidi kwesịrị ịnara ya maka 15 gaa na 20 izu. Maka ụmụaka ndị dị afọ iri na ụma na 12, dọkịta ha ga - ekpebisi ike.
Ọ bụrụ na dọkịta gị edepụtara gị usoro 0.5 mg / kg / dayototinoin, nke ahụ apụtaghị na ị ga-eji ọgwụ ahụ mee ihe n'oge usoro ọgwụgwọ. Dabere na nzaghachi ị na-aṅụ ọgwụ, karịsịa dị ka nchacha nke acne gị na ọdịdị nke mmetụta ahụ dị mma, dọkịta gị nwere ike ịgbanwezi ọgwụ ahụ.
Nke a bụ usoro ntanetị nke Isotretinoin 4759-48-2 dịka ibu arọ ahụ
Ọnụ mg / ụbọchị
Kgs pound 0.5 mg kwa klas 1 mg kwa klas 2 mg kwa kg *
Otú ọ dị, e nwere otu pụrụ iche pụrụ iche na ntinye ọgwụ. Ndị okenye na nnukwu ihe mgbagwoju anya nke na-eme ka egwu ma ọ bụ nodular acne na-egosi na ha na-atụgharị nwere ike ịdị mkpa mgbanwe site na 2.0 mg / kg / ụbọchị, na-adabere na ha na-anabata ndị na-akwa ọrịa (Isotretinion).
Ekwesiri ijiri nri (isotretinoin) na nri. Ọ dị mma na ị na-aṅụ ọgwụ ọ bụla ozugbo ị risịrị nri ma ọ bụ nri iji jide n'aka na ọ dị irè uru nke ọgwụ ahụ.
Enweghị ike iji ọgwụ na-eri nri ga-ebelata ahụ mmadụ nke ọma. Ya mere, tupu dọkịta gị gbanwee dose gị elu iji mee ka ọgwụ ahụ dịkwuo irè, a ga-ajụ gị ajụjụ banyere ntinye gị na ntụziaka nri.
Ọzọkwa, ị ga-elo kpamkpam Accutane capsule na-enweghị kpochapu, na-agbasa, na-ata ma ọ bụ na-aṅụ ya. E wezụga nke ahụ, ị ​​ga-eri ya na mmiri iko zuru ezu.
E gosipụtara otu ụzọ nke Isotretinion na-eme ka nkwụghasị nke cystic ihe zuru oke ma ọ bụ na-adịgide adịgide. Otú ọ dị, dị ka a kpọtụrụ aha na mbụ, ọ bụrụ na onye na-achọ ọgwụgwọ gị chọpụta na ọ dị mkpa ka ị nwee usoro ọgwụgwọ nke abụọ, ọ ga - amalite site na izu nke asatọ n'izu ụbọchị nke mbụ gwụchara.
Na nyocha iji nyochaa irè nke dosotretinoin dosages, e guzobere na ha nile nyere mbụ ikpochapu acne. Otú ọ dị, a na-achọ ịlaghachi azụ na ụda ala dị ala karịa nchekwa.
Ihe iji zere mgbe ị na-ewere isotretinoin
Na-amụ nwa mgbe ị na-aṅụ ọgwụ na n'ime otu ọnwa mgbe njedebe nke usoro ọgwụgwọ ahụ.
Ị na-enye nwa ara n'oge usoro ọgwụgwọ na n'ime otu ọnwa mgbe ọ gasịrị. A na-enyo enyo na ọgwụ ahụ nwere ike ịgafe mmiri ara ehi gị ma nwee ike imerụ nwa gị ma ọ nweghị ihe sayensi ọ bụla iji kwado esemokwu ahụ.
Ịnye ọbara mgbe ị na-aṅụ ọgwụ na n'ime otu ọnwa mgbe njedebe nke usoro ọgwụgwọ. Ọ bụrụ na nwanyị dị ime ga-enweta ọbara ị nyere, nwa ya nwere ike ịnọ n'ihe ize ndụ nke mmetụta dị na ọgwụ ahụ.
Ịnara ọgwụ ndị ọzọ ma ọ bụ mkpụrụ ọgwụ ndị nwere Accutane (isotretinoin) ma ọ bụrụ na ịnwere ihu ọma gị.
Ịkwọ ụgbọala n'abalị ma ọ bụrụ na Accutane (isotretinoin) emetụtawo ọhụụ abalị gị.
Inwe usoro ịchọ mma maka akpụkpọ anụ, mgbe ị na-ewere oge na ọnwa isii mgbe usoro ọgwụgwọ ahụ gasịrị. Usoro gụnyere nsị, dermabrasion, na lasers. Nri ahụ nwere ike ime ka ị dịkwuo mfe ịnweta ụkọ sitere na usoro ndị a.
Inwe ìhè ìhè anyanwụ na ìhè ultraviolet. Ngwurugwu ahụ nwere ike ime ka ahụ gị dịkwuo ọkụ.
Ịkọrọ ndị ọzọ ọgwụ ahụ. Dị ka e kwuru na mbụ, a ghaghị ịṅụ ọgwụ na ọgwụ dọkịta.
Ụkwụ na-ejideghị (isotretinoin)
O b ur u na i chefuo ihe nd ii ji egbochi ya, i kwes ir i iburu ya ozugbo i nwere ike. Ka o sina dị, ị chetara banyere ya mgbe ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge maka ọgwụgwọ ọzọ gị, na-egbusi ọgwụ ezighi ezi ma maliteghachi usoro ịhazi oge gị. Were ọgwụ ọzọ n'ọdịdị oge. Ejila uzo abuo n'otu oge ma obu di nso.
Ntughari ndi choro
N'ihi ihe ojoo ojoo nwere ike ibute na Accutane (isotretinoin), a na-ere ahịa nke ọgwụ ahụ naanị site na nkesa nkesa pụrụ iche a na-akpọ iPLEDGE ™. Ihe oriri na ọgwụgwọ kwadoro usoro ihe omume ahụ.
A ga-edebanye aha ndị na-ede ọgwụ na ọgwụ ahụ ma megharịa ya na programmụ a - iPLEDGE. E wezụga nke ahụ, ọgwụ ahụ bụ nanị maka ndị ọrịa ndị edebanye aha na ihe omume ahụ ma chọpụta na ha ga-emezu ihe omume nke usoro ihe a.
Ya mere, ihe niile gbasara usoro iPledge?
Ebumnuche bụ isi nke iPledge program bụ iji jide n'aka na ọ bụ naanị ndị ruru eru na-ewere ọgwụ ahụ na enwe mmetụta ndị nwere ike ịnweta dịka ọ bụla o kwere mee site na ịgbaso ọgwụ ọgwụ ahụ na nlezianya na-edebe usoro ịdọ aka ná ntị. Ihe ndị metụtara usoro ihe omume ahụ na-agụnye nyocha ime afọ na ịmụ nwa. Gwa dọkịta gị ka ọ mara ihe gbasara usoro ihe omume ahụ.
Ndị ọrịa nwere ike ịtụrụ ime kwesiri ịmalite ịmị ọkụ nke afọ abụọ ma ọ bụ ọgwụ ime nwa na-enwe nke kachasị mara na 25 mIU / mL. Nsonaazụ ha maka ule abụọ ahụ ga-abụ ihe na-adịghị mma maka ha ịnata nkwekọrịta mbụ ha bụ Accutane (isotretinoin).
Nlere mbụ ahụ bụ onye ọkachamara na-edepụta Accutane (isotretinoin) na-egosi na ọkpụkpụ ahụ ruru eru maka ọgwụgwọ Accutane. Nchoputa nke uzo abuo bu nke mere iji kwado ihe nchoputa mbu. E kwesiri ka a rụọ ya na ụlọ ọrụ na-eme nnyocha na CLIA. Oge n'agbata ule abụọ ahụ ekwesịghị ịbụ ihe na-erughị ụbọchị 19.
Ọ bụrụ na ị bụ nwanyị na-arịa ọrịa na-ekesa ọrịa nke na-arịa ọrịa ahụ na-enwe oge ọ bụla, a ghaghị ime nyocha nke ime afọ nke abụọ n'ime ụbọchị ise mbụ nke oge ịhụ nsọ nke bụ kpọmkwem tupu mmalite mmalite nke usoro ọgwụgwọ Accutane (isotretinoin). E wezụga nke ahụ, a ghaghị ime ule ahụ mgbe ị jiri ụdị ọgwụgwọ abụọ maka ụbọchị 30.
Ọ bụrụ na oge mgbatị gị bụ oge ụfọdụ, ma ọ bụ na-aga na usoro ọmụmụ ịmụ nwa nke na-egbochi ọbara ọgbụgba, a ghaghị ime ule nke abụọ n'ime oge na-aga n'ihu mmalite nke usoro ọgwụgwọ Accutane (isotretinoin). Dịka ọ dị na nwanyị nwere oge ịhụ nwa oge, a ghaghị ime ule a mgbe ị jisịrị ụdị ọgwụgwọ abụọ maka ụbọchị 30.
Ikwesiri ighota ma gbasoo ihe nile choro nke usoro amuma iPledge. Ma ọ bụghị ya, ị gaghị eru inweta ọgwụ ma ọ bụ ọgwụ ọzọ ọgwụ ọgwụ ahụ.
Anyị na-ahụbu na e nwere ọtụtụ ụdị isotretinoin. Ihe ọzọ ị kwesịrị ịmara bụ na ụdị isotretinoin dị iche iche na-arụ ọrụ dị iche iche. Dị ka ndị dị otú ahụ, ọ bụghị ụdị ọ bụla nke isotretinoin ka a ga - eji capsules nke otu ụdị ọgwụ ọjọọ.
Dị ka ọmụmaatụ, ekwesịrị ka ị ghara iji ihe odide Accutane na Absorica capsules dochie ya. Ya mere, ọ bụrụ na ị mejupụta gị isotretinoin (Accutane) ma ịchọta na ọ dị iche na nke mbụ, chọpụta nkọwa site n'aka onye na-ere ọgwụ.
Nso idi utịp utịp nke Accutane
Ma eleghị anya n'oge a, ị na-eche, sị, "bụ Ezigbo nchekwa?"Nke ọma; dịka ọgwụ ahụ bụ ọgwụgwọ dị irè nke dị irè, dịka ọgwụ ọ bụla, ọ nwere ike ịkpata mmetụta ụfọdụ. Ma ọ dịghị ihe ọ bụla ị ga-echegbu onwe gị banyere mmetụta dị iche iche nke Isotretinoin karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-agbaso akwụkwọ edemede ahụ ma debe nlezianya.
Anyị na-aga ịhụ ihe ndị ọzọ banyere ndọtị (azụ na onyinye) ebe a ka oge na-aga.
Ihe ọzọ ị ga-eburu n'uche banyere mmetụta ndị dị na Accutane bụ na ọ bụghị onye ọ bụla nke na-enweta ọgwụ ahụmahụ ha (mmetụta na-adịghị mma). E wezụga nke ahụ, mmetụta na-adịghị mma na-apụ apụ mgbe ị kwụsịrị ịṅụ ọgwụ.
Ọ bụ ezie na mmetụta ụfọdụ dị na Accutane na-adịkarị ma na-adịchaghị njọ, ndị ọzọ na-adịkarị ụkọ ma dị njọ karị. Ka anyị leba anya na mmetụta ndị nkịtị nke Accutane.
Nsogbu ndị isi nke Isotretinoin
Ihe ndị metụtara ọrịa Isotretinoin na-agụnye:
Mmiri akpụkpọ ahụ, ịcha ụcha na ikpo ọkụ
akpụkpọ anụ, karịsịa n'ọbụ aka na nkwụ
Ọnụ, imi, na anya nku
Belata anya nhụhie abalị
Ike ọgwụgwụ (ike gwụrụ
Red, egbugbere ọnụ na egbugbere ọnụ egbugbere ọnụ
Mmetụta utịp nkịtị nke Accutane
Ọ bụ ezie na mmetụta ndị na-esonụ nwere ike ime, ọnọdụ ha anaghị adịkarị. N'ezie, ọ bụ naanị ihe na-erughị 0.001% nke ndị na-ewere ọgwụ ọjọọ ahụ bụ mmetụta ndị dị njọ. Ihe ndị a gụnyere:
Ọkpụkpụ na nkwonkwo obi ọjọọ
Ọkpụkpụ na abdominal mgbu
Mgbu ma ọ bụ ihe isi ike mgbe ị na-elo ihe
Ọbara ọbara ọbara
Akpụkpọ anụ na egbugbere ọnụ na-egbuke egbuke. Maka nchekwa, enwela ọgwụgwọ ọ bụla, dermabrasion, ma ọ bụ laser mgbe ị na-ewere isotretinoin maka akpụma nakwa maka ọkara ọnwa 6 mgbe ị kwụsịrị, n'ihi na nke a nwere ike ime ka ụkọ ma ọ bụ ihe mgbu anụ.
Ọtụtụ ndị na-ajụ, sị, "Ndị inyom dị ime anaghị adị mma?" Azịza ya bụ Ee; ọ dịghị mma ma ọlị maka ụmụ nwanyị dị ime.
Ndi nwanyi di ime na-enwe obi uto ka ha jiri aghara aghara aghara maka ihe otutu ma obu ihe otutu ogwu ma obu maka nzube obula. Nakwa, ndị inyom nwere ike ime ime n'oge ọgwụgwọ Roaccutane ekwesịghị iji ọgwụ ahụ.
Ihe kpatara nlezianya ahụ bụ n'ihi na mmetụta nke usoro Isotretinoin nke arụ ọrụ, n'agbanyeghị na usoro Isotretinoin, nwere ike imetụta nwa ebu n'afọ, na-akpata nsogbu nwa. Ụfọdụ akụkụ ahụ nke akụkụ ahụ nke nwa ebu n'afọ nwere ike imetụta ọhụụ, ụbụrụ, ntị obi, anya yana thymus na parathyroid glands.
Nakwa, nwanyị dị ime nke na-aṅụ ọgwụ a bụ ihe dị ize ndụ nke ime ime na-enweghị mmerụ ma ọ bụ ịmụ nwa.
Ọ bụrụ na nwanyị nke na-ewere Accutane (Isotretinoin) na-emetụta (mgbe ọ dị ime), ọ ghaghị ịkwụsị iji ọgwụ ahụ mee ihe ozugbo ma gaa na Obstetrician-Gynecologist bụ onye nwere ahụike nke ịmụ nwa.
Ọ bụ ezie na e nweghị ụzọ ziri ezi nke ọkachamara nwere ike isi gosi na usoro Isotretinoin emetụtaghị nwa e bu n'afọ, ọ ga - eme nyocha iji gosi na ọ ga - ekwe omume otu. E wezụga nke ahụ, nne ga-enye ndụmọdụ iji nyere ya aka ịnagide nchekasị na nsogbu ndị na-adịghị mma.
DỌ bụ Isotretinoin na-akpatakwa mbà n'obi?
Mmetụta ịda mbà n'obi bụ nsogbu kachasị mma nke Isotretinoin. Enwere ụfọdụ akụkọ na-egosi na ụfọdụ ndị na-aṅụ ọgwụ ịda mbà n'obi. Otú ọ dị, ọ dịghị ihe ọmụma sayensị na-ejikọta egbu egbu na igbu onwe ya.
Ọ dịghị onye nwere ike ịkọwapụta otú ọgwụ ahụ nwere ike isi kpatara ịda mbà n'obi. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị ọkà mmụta sayensị kwenyere na ọgwụ ahụ nwere ike imebi mmepụta nke serotonin nakwa otú o si eji ya eme ihe.
O nwere ike ịbụ nke a na-atụ egwu ma ọ nweghị ihe kpatara mkpu. Ihe Mere? Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na-eji Isotretinoin enwe nsogbu ọ bụla. N'ezie, ọ dịghị ihe àmà zuru oke na-ejikọta iji Isotretinoin na ịda mbà n'obi. Mma ka; ụfọdụ ọmụmụ na-etinye obi abụọ banyere njikọ dị n'etiti abụọ ahụ.
Ka o sina dị, dị ka ihe nlezianya, ọ bụrụ na ị nwere akụkọ ịda mbà n'obi ma ọ bụ ụdị ọrịa ọ bụla ọzọ, jide n'aka na ị ga-ebute ya n'uche onye ọkachamara ahụike gị tupu ị malite ịmalite Isotretinoin. Ozokwa, ọ bụrụ na ị mepee mgbaàmà ịda mbà n'obi nwere echiche igbu onwe onye ma ọ bụ psychosis mgbe ị na-ewere Isotretinoin; egbula oge ikwe ka onye ọrụ ahụike gị mara banyere ya.
Otu esi emeso mmetụta ndị dị na Accutane
Enwere ihe ndị ị nwere ike ime iji lebara mmetụta dị iche iche nke Isotretinoin anya:
Njirimara Isotretinoin Otú e si anagide ya
akpụkpọ anụ ma ọ bụ egbugbere ọnụ Tinye moisturizer (mmanụ na-enweghị mmanụ na-adịghị mma maka moisturizer maka nlezianya anụ) na egbugbere ọnụ n'egbugbere ọnụ gị
Belata oge ịsa ahụ na-erughị minit 2 ma jiri mmiri ṅụrụ ṅara ṅụọ kama ọkụ
Ịmawanye akpụkpọ anụ ka ìhè Gaa na anyanwụ na-egbukepụ egbukepụ ma tinye nnukwu ihe, na-egbu mmanụ na-adịghị mmanụ mmanụ na akpụkpọ ahụ gị ọbụna mgbe ọ na-ezo. Zere iji sunlamp ma ọ bụ anyanwụ
Anya nhicha Rịọ onye ọkachamara anya gị ka ọ gwa gị ka ụfọdụ anya tụlee. Ọ bụrụ na ị na-ele anya anya kọntaktị na ha na-eche iru ala mgbe ị na-ewere Isotretinoin, ị nwere ike iji ha na-eji iko mee ihe maka oge ị ga-ewere ọgwụ ahụ.
Nri ọnụ / akpịrị Kedu gom ma ọ bụ sweets.
Rịọ onye na-ere ọgwụ gị ka ọ gwa gị ọgwụ ọgwụ mgbu.
Zere omume ndị siri ike ka ha nwere ike ime ka nsogbu ahụ ka njọ
Isotretinoin Nchekwa Ọ Na-eji?
Azịza ma mọbụ Isotretinoin nwere ike iji ma ọ bụ ma ọ bụ ee. Ọ dabeere na onye.
Nke mbụ, dịka e kwuru na mbụ, enwere ọnọdụ ụfọdụ (dịka ọmụmaatụ, ndị inyom dị ime ma ọ bụ ndị nwere ike ime ime) nke na-eme ka ụfọdụ ndị ghara ịdị ọcha iji ọgwụ ahụ. Ọ bụrụ na ị nwere ọnọdụ ndị a, ọ gaghị adịrị gị mma ijiri Isotretinoin
E wezụga nke ahụ, Isotretinoin bụ nanị ndị mmadụ nwere ọrịa siri ike ma ọ bụ ihe mgbochi nke azụ ma ọ bụ ahụ nke na-agaghị edozi ọbụna mgbe ọ na-eburu ihe otutu ma ọ bụ ọgwụgwọ ọ bụla maka ihe otutu. Ọ bụrụ na ụbụrụ gị dị nwayọọ, ọ ga-abụrịrị na onye na-achọpụta ọgwụ gị ga-enye gị ngwaahịa ndị ọzọ dị nro na vitamin A maka ihe otutu ma ọ bụ ọgwụgwọ ọ bụla ọzọ maka ọrịa.
Otu esi zụta Accutane (isotretinoin) online
Ọ bụrụ na onye na-emepụta ihe, onye ọrịa ma ọ bụ onye na-ahụ maka ọgwụ na-edozi ahụ, ezutewo ihe niile a chọrọ n'aka iPledge na mkpa ịzụta isotretinoin, naanị ị nwere ike ịnweta ya n'enweghị ohere. Otú ọ dị, cheta na e nwere ọgbaghara mgbe a bịara n'ịzụ ahịa ọgwụ a; ọ ga-ere naanị site na iPledge-mma suppliers na pharmacists.
Iji nye gị ikikere ka ị na-ekesa ma ọ bụ na-ere isotretinoin, ị ga-ebu ụzọ debanye aha na iPLEDGE ma kwenye na imezu ihe niile dị mkpa nke usoro ihe omume ahụ nyere maka nkesa ngwaahịa nke isotretinoin.
N'ịtụle ihe ndị a chọrọ, aasraw.com bụ ihe kasị mma, nke kachasị mma na ebe ị nwere ike ịzụta isotretinoin effortlessly. Anyị na-ere ezigbo raw isotretinoin na capitol isotretinoin nye ndị na-azụ ahịa na ndị na-enye ọgwụ na asọmpi asọmpi.
Kedu ka ị ga - esi chekwaa Accutane (isotretinoin)?
Ekwesịrị ịchekwa (isotretinoin) na akpa akara na okpomọkụ (59 ° ka 86 ° F, 15 ° ruo 30 ° C). Ebe ị na-edebe ọgwụ a kwesịrị iwepu ọkụ ma mee ka ìhè doo anya ma ghara ịbụ n'efu. E wezụga nke ahụ, ọgwụ ahụ ekwesịghị ikuku oyi ma kwesịghị ịhapụ ụmụaka.
Ejila ọgwụ a ma ọ bụrụ na ọ dịghịzi mkpa maọbụ oge agafebeghị. Otú ọ dị, ọ bụghị nanị ịchọta ihe ọ bụla; gwa onye ọkachamara maka ahụike gị maka ntụziaka kwesịrị ekwesị.
Ka anyị lee ụfọdụ nkuzi Isotretinion site na ụfọdụ ndị ji ọgwụ ahụ eme ihe.
Hannah White: "Enweghị ike ịkwa jụụ! N'ikpeazụ, enwere m ike ịchọta ihu na-egbu egbu nke na-agụsi m ike ruo ọtụtụ afọ. Ebe ọ bụ na m bụ 12 afọ iri afọ gara aga, m na-alụ ọgụ dị ọkụ. Enwekwaghị m ùgwù onwe m n'ihi ya.
Agbalịrị m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla mgbochi ọkpụkpụ ma ọ dịghị nke n'ime ha jisiri ike kpochapụ ihe oyiyi ahụ. N'afọ gara aga, enyi m gwara m ka m gbalịa Isotretinoin nke m mere. Enwetara m ọgwụgwọ ọnwa abụọ gara aga ma enwere m nnukwu obi ụtọ na ya. Akwụ m ekpochapụrụ na ebe ojii na-apụ n'anya. M ga-akwado onye ọgwụ a. "
Kelly: Enweghị m ikelele onye ọ bụla nwere isotretinoin nke acne. Ọ bụrụ na ọ bụghị maka ọgwụ ọjọọ, m ka ga-esi na-emeso nnukwu ihe ọkụkụ siri ike. M ga - enye onye ọ bụla nọ n'ebe ahụ aka ka ọ bụrụ na ọ na - agbanyeghị na ị nweta ọgwụ na - agwọ ọrịa na - ahụ maka ịga leta dọkịta ha ma chọpụta ma ọ dị mma ka ha jiri Isotretinoin (Accutane). N'ezie, ọgwụ a na-arụ ọrụ ebube; Enwere m ike iji obi ike kwado nke ahụ.
Juliana: "Ọ bụ ezie na esotretinoin na-akwụ m ogwe aka na ụkwụ, enwere m ego kachasị mma maka ego m. N'ezie, enwere m mmetụta na m nwetara karịa ihe m kwụrụ. Ekwenyesiri m ike na ọ bụrụ na m nọgidere na-eji ọgwụ m na-emebu, agara m etinye ego ka ukwuu, ma na-enweghị ihe ndị chọrọ. Enwere m ike ịkwado Accutane maka ihe otutu nke kụrụ ihe ndị ọzọ na vitamin A maka ihe otutu. "
Emily Hanson: "wow! Enweghi ike inwe obi uto na usoro isotretinoin nke ihe na ihe ozo. Mgbe m gụsịrị ọtụtụ nnyocha nchịkọta nke isotretinoin, ekpebiri m ileta onye na-ere ọgwụ na-edozi ma ọ bụrụ na ọgwụ ahụ kwesịrị m.
Mgbe ọ hụrụ na m na-agwọ ọrịa ndekọ, o kwenyere na a pụrụ ịgwọ anwụrụ site na isotretinoin dị ka ọ bụ siri ike ma nọgidere ruo ogologo oge n'agbanyeghị ọgwụgwọ dị iche iche. Amalitere m ịhụ mgbanwe dị mma na ihu m n'ime izu 10 mbụ nke usoro ọgwụgwọ na site na izu 20th, ihe otutu ahụ kwụsịrị kpamkpam. "
Billy Harts: Abụ m onye na-enye ọgwụ ikike na iPledge-a kwadoro ya na ọgwụ ọjọọ dị na Illinois. Amalitere m ere isotretinoin dịka otu afọ gara aga na nwata ...! Ọgwụ a na-ere dị ka hotcake. Ọbụna na ihe ndị a na-akpọ iPledge, ndị ọrịa m na-eto ya. Ọ ga-amasị m ịkele aasraw.com maka iwetara ya nso m.
Salome Williams: "Echela banyere ego efu; ọgwụ a bụ ezigbo ihe maka ọgwụgwọ ọrịa na-egbuke egbuke. Ọ bụ afọ atọ kemgbe oge m gwụchara usoro ọgwụgwọ m na-agwọ ọrịa, enweghịkwa m ike inwe obi ụtọ karịa ya. Akwụ m apụla n'iyi na enwere m obi ike ugbu a. "
Charlene B: Ọdịdị nke ọgwụ a na-alụ ọgụ megide akwara siri ike bụ nke a na-adịghị ahụkebe. Enwetara m ọtụtụ iri ọgwụ ọgwụgwọ na ọ bụ nanị isotretinoin nke mere ka m nwere onwe m pụọ na nsogbu ahụ. Enwere m ekele dị ukwuu maka ọgwụ ọjọọ a.
Isotretinoin enweghị obi abụọ ọ bụla na ọ bụ ọgwụgwọ acne dị irè. Ọ bụrụ na ị nwere nnukwu mgbochi mgbagwoju anya ma ọ bụ onye nwere ọrịa na-ekpo ọkụ nke na-adịghị edozi ọbụna mgbe ị na-aṅụ ọgwụ ọgwụ ndị ọzọ, ọgwụ ahụ nwere ike ịbụ nhọrọ nhọrọ ịgwọ ọrịa. Otú ọ dị, ndụmọdụ dọkịta dị oké mkpa tupu mmadụ amalite ịṅụ ọgwụ a. Nakwa, onye ọrịa na onye na-enye ọgwụ ahụ aghaghị ịhụ na ha na-agbaso ihe niile dị mkpa gbasara njikwa ọgwụ ahụ.
Wysowski, Diane K., Joslyn Swann, na Amarilys Vega. "Iji nke isotretinoin (Accutane) na United States: ngwa ngwa na 1992 site na 2000." Akwụkwọ akụkọ American Academy of Dermatology4 (2002): 505-509.
Feldman, S., Careccia, RE, Barham, KL, & Hancox, J. (2004). Nchoputa na ọgwụgwọ otutu. Ọfụma American Family, 69(9), 2123-2138.
Barak, Y, Wohl, Y., Greenberg, Y., Dayan, YB, Friedman, T., Shoval, G., & Knobler, HY (2005). Mmetụta ụbụrụ na-emetụta usoro ọgwụgwọ (isotretinoin). International clinical psychopharmacology, 20(1), 39-41.
Stern, RS, Rosa, F., & Baum, C. (1984). Isotretinoin na afọ ime. Akwụkwọ akụkọ American Academy of Dermatology, 10(5), 851-854.
Barnes, CJ, Eichenfield, LF, Lee, J., & Cunningham, BB (2005). Ụzọ dị irè maka iji oral isotretinoin eme ihe maka akpụrụ akpụ. Ọmụmụ ọgwụ ụmụaka, 22(2), 166-169.
Kilcoyne, RF, Cope, R., Cunningham, W., Nardella, FA, Denman, S., Franz, TJ, & Hanifin, J. (1986). Mpekorọkọ nke obere mkpịsị ụkwụ na ọgwụgwọ isotretinoin obere. Mgbasa redio na-achọ nchọpụta, 21(1), 41-44.
Raw Proviron (Mesterolone) na bodybuilding, usoro, na okirikiri	Ihe niile gbasara Trenbolone Enanthate ntụ ntụ